Iingxaki zesikhumba ebusweni ebusheni ziyaqondakala kwaye zisesigxina. Kodwa xa ubuncinci bebude, kwaye ingxaki yesikhumba ihleli, kubalulekile ukuqala ukuyinyamekela ngendlela ekhethekileyo.
Okokuqala, kufuneka uqonde izizathu ezinokwenzeka zeengxaki zesikhumba. Apha i-spectrum ibanzi kakhulu. Nangona kwixesha elizayo uceba ukunyamekela isikhumba sakho ngokwakho, ngoko ngenxa yezizathu zokuzithemba ngamandla abo akukafanelekanga. Akusiyo yonke into engafanelekanga ukuya kutshintshi. Kungcono ukubonisana ne-cosmetologist-dermatologist. Ugqirha uya kunika iimvavanyo, kuquka iisampulu zefungi kunye nezikhumba zesikhumba. Kwaye ukuba okokuqala, kulula ukuphilisa, ngoko imeko yesibili iyinkimbinkimbi. I-skin mite ihlala kuwo wonke umntu, kodwa kumntu uyahamba engaboni, kodwa kumntu ubonakalisa njenge-acne, izipho kunye nezibilini.
Esi sifo sinobungozi ngenxa yobuninzi beendlela ezinobungozi kunye namabala aluhlaza. Kodwa nangona ufumaniswe ukuba unesikhumba, musa ukuphelelwa lithemba. Oku kukude nesivakalisi. Oku nje kuthetha ukuba ukususela ngoku kuya kufuneka unike isikhumba sakho ingqalelo. "Umsebenzi" wesikhumba sesikhumba asibonakali rhoqo, kukho amaxesha okuhla, xa ulusu luba lucocekile, kwaye kukho izinto ezinzima, apho kufuneka ugcine ngokufanelekileyo ukutya kunye nokujongana nengxaki yesikhumba. Ugqirha unokukwenza ezinye izifo. Mamela iingcebiso kunye neengcebiso.
Ukuba uhambo oluya kwi-cosmetologist-dermatologist aluzange lunike iziphumo, jonga impilo ngokupheleleyo. Qiniseka ukuba uvavanya iipasasites (kuquka ukujonga isibindi). Mhlawumbi isizathu sokuba iingxaki zesikhumba zihlanganiswe apha.
Ukuba impilo iphela iyinto eqhelekileyo, kodwa iingxaki "zicacile", ke sebenzisa imimiselo eqhelekileyo yokunyamekela isikhumba sengxaki ebusweni bendlu.
Umthetho owodwa, kufuneka unakekele ulusu ngokuchanekileyo. Ngoko ke, okokuqala kufuneka ufune isigqibo ngoluhlobo lwesikhumba: owomileyo, oqhelekileyo, onobuhlwempu, odibeneyo. Ngaphandle kwalokhu awuyi kukwazi ukukhetha i-cosmetic efanelekileyo yokunyamekela. Ukuba awuqinisekanga malunga nencazelo, sebenzisa iphepha eliqhelekileyo lokulandelela. Geza, linda imizuzu eyi-15 uze unamathisele iphepha lokulandelela ebusweni bakho. Ukuba ummandla ungangcoliswa, ulusu lumile (okanye luqhelekileyo); ukuba iqela li-greasy, isikhumba sinamafutha, ukuba iindawo zihlala kwiindawo ezimbalwa (ngokuqhelekileyo ibunzi, impumlo, i-chin, ixutywe.) Ngokuhambelana nolusu lolusu, khetha iimveliso zezonyango.
Njengomthetho, ulusu lenkxalabo, lukhuthele kakhulu, zigcine kwaye uqonde oko kubangele ukucasula (ubomvu, ukukhawuleza okanye, ngokuchaseneyo, ukukhutshwa kwamafutha amaninzi). Ingaba yimveliso (i-strawberries, i-raspberries, i-tshokoleta, njl.) Okanye izinto: ulwandle ityuwa, i-alcohol lotions. Kufanelekile ukunciphisa ukusetyenziswa nokusetyenziswa kwezi zinto kunye nezinto.
Iimaski ebusweni zikhetha kwakhona ngokohlobo lwesikhumba sakho.
Okwesibini, ukunakekelwa kwesikhumba esinengxaki ebusweni bendlu kukubonisa ukuba uhambelana nokucoceka kunye "nokungahambi kahle". Ulusu ludinga imihla ngemihla (ukucocwa kabini ngosuku). Ngokuhlwa, kufuneka ususe isilumkiso kwaye uhlambulule kakuhle ulusu. Eyona ndlela, kuqala indlela elula yokuhlamba, kunye ne-tonic ene-alcohol. Yishiye umkhwa wokususa iimpumlo, i-acne ngezandla zakho, uya kuphucula nje imeko. Ukuba kukho imfuneko ebalulekileyo yokwenza oku, yenza inkqubo ngenoton swab, kwaye emva koko, sulela le ndawo ngesisombululo sotywala. Kodwa susa kuphela indawo yokuvuvukala.
Ukumisa iimpumlo kunye ne-acne, sebenzisa kwakhona iimveliso ezikhethekileyo ezizisebenzisela ngqo kwindawo echongiweyo, njengomthetho, banombala obala kwaye ngoko unokusetyenziswa nanini na.
Ukuphulukisa izibilini kunye namanxeba, ungasebenzisa amafutha amaninzi (umzekelo, i-streptocidal) ngaphambi kokulala.
Ukunyamekela ingxaki yesikhumba ebusweni bendlu ungasebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zemifuno. Kanye ngenyanga, ukuba uhlambuluke ngokucokisekileyo, yenza iibhebha zokuhambisa. Brew the herbs (chamomile, calendula, umtya), ukugoba phezu kwesitya kunye nokugubungela intloko ngetayili ngemizuzu eyi-10-15. Iimbini zamanzi kunye nemifuno ziya kuvula ii-pores, zihlambulule, zisuse ingqumbo. Emva koko, hlamba (unokutshiza), kwaye ekugqibeleni uhlambe ubuso bakho ngamanzi apholileyo. Ungasebenzisa i-ice (eyenziwe ngamanzi acocekileyo okanye amayeza atshwayo). Ukususa ukucaphukisa kunye nokunyanga kwesikhumba kufanelekile ukuhlamba ngocingo oluphucukileyo.
Xa ukhathalela ingxaki yesikhumba ebusweni ekhaya, ukucoceka kunye nokuhamba rhoqo kubalulekile. Ukuba uya kuchitha iinkqubo ngezikhathi ezithile, akusayi kuba nempembelelo. Yinyamekele yonke imihla, iya kuba ngumkhwa kwaye ayisayi kuthatha ixesha elide.
Kwaye ekugqibeleni, ukunyamekela ingxaki yesikhumba ekhaya , kufuneka ulandele ukutya. Kufuneka uzincitshe ukutya ukutya okunamafutha, ukutya okubhakabhaka, ukutya okuthosiweyo, iipeseki, i-Coca-Cola kunye nezinto) Khumbula ukuba iingxaki zesikhumba ziphuhliswa kungekuphela kokusetyenziswa kokutya okungenakulungileyo. Ukulimala kubangela utywala nokutshaya.
Ikhumba elomileyo leelusiki
Imvakalelo kunye neenwele zakho
IJam kumantongomane enantambo
UMaria Maksakova kwisambatho somtshato uya kucula eKiev inkumbulo yokubulawa kukaDenise Voronenko
Isidlo esingenasitye sisiseko sempilo yakho.
Ukutya kobuhle besifazana
Yintoni kwaye ichaphazela njani impilo yemntombazana?
U-Irina Bezrukova uya kumangalela ipaparazzi
Inja eCrest Crested
P - Ukuqhubeka. UVladimir Friske uya kubhala incwadi yakhe ngokuphendula kuShepelev
Iintlobo zobume babantwana